BBC Somali - Warar - KA oo aaseysa macdan-qodayaal la dilay
KA oo aaseysa macdan-qodayaal la dilay
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 23 Agoosto, 2012, 07:39 GMT 10:39 SGA
Jacob Zuma oo la hadlaya qaar ka mid ah macdan qodayaasha Koonfur Afrika
Dalka Koonfur Afrika waxa ka dhacaya aaska 44 macdan qodayaal ah oo lagu dilay muran ka dhashay lacagaha la siiyo.
Inta badan dadka dhintay oo ahaa macdan-qodayaal ayaa waxa toddobaadkii hore toogasho ku dilay ciidanka booliiska, iyaga oo mudaharaadaya.
Munaasabadda aaska ayaa ka dhacaysa meel macdanta laga qodo oo ku taal magaalada Marikana oo dilku uu ka dhacat.
Waxaa jiray dood weyn oo ka taagneyd sida dadkaasi loo laayay.
Madaxweyne, Jacob Zuma ayaa waxa si diirran u soo dhaweeyay macdan qodayaasha mudaharaadayay.
Dalka Koonfur Afrika waxa uu soo saaraa saddex meelood macdanta platinum ee adduunka oo dhan, waxaana kor u kacay qiimaha birta iyadoo laga walaacsanaa in la heli waayo.
Arrintan ayaa waxa ay sii ballaarisay kala foggaanta u dhexeysay dadka saboolka ah iyo dadka dhaqaalaha heysta ee dalka Koonfur Afrika, taasi oo weriyayaashu ay sheegayaan in ay sii wiiqeyso taageerada xisbiga talada haya ee ANC.